February 2019 - Boga Wise Man
Maado Keliya Ha Baran!
James Lovelock waa saynis yahaan Ingiriis ah oo madax banaan. Muddo hada laga joogo dhawr sano waxaan habeen daawaday barnaamij saynis ah oo BBC-du saddex saynis yahan oo aqoonta sayniska wax ka taray balse bahda sayniska ee Ingiriisku ay iska fogeysay lagu ammaanayay. Mid kamid ah saynis yahanadii habeenkaas lagu soo qaatay barnaamijkan lagu canaananayay […]
Abiy Ahmed – Maxaad Rabtaa?
Kasoo qaad inaad tahay Abbiy Ahmed. Waxaad tahay 42 jir, waxaad Raysal Wasaare u tahay dalalka Afrika iyo dunidaba ugu faca weyn. Waxaad madax u tahay 105 milyan oo qof. Aabahaa wuxuu ahaa Oromo muslim ah hooyadanaa Amxaaro kiristan ah. Waxaad tahay nin fahmo badan oo waxbarashadu way kuu fududayd wakhtigii iskuulka. Waxa kaloo kuu […]
8.15 PM Iyadoo loo fiirsado mooyee qof dusha ka eegay muu qiyaasi karayn ninka da’diisa saxda ah. Keligii ayuu fadhiyey maqaaxi habeenkii lagu caweeyo. Waxa uu si fiican u akhriyey buug weyn oo jaldi loo geliyey magaciisana aan la arki karaynin. Umuu muuqan mid degdegaya oo wakhti ku socdo. Habeenkaa magaalada Hargeysa waxa ka da’ay […]
Yaa Noqon Doona?
Waxa I cajab geliyay maqaal aan muddo sanad ku dhaw ka hor ka akhriyey website-kaa majalada newstatesman (www.newstatesman.com) oo uu qoray dhaqaalayahan Ingiriis ah oo lagu magacaabo Paul Mason. Dooda maqaalka Paul Mason waxay ku saabsanayd in Ingiriiska iyo Maraykanka dani ugu jirto inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah (international law) maadaama ay iyagu qoreen sharcigaas. […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka 2aad – Qaybta 16 aad
Timo wuxuu ka mid ahaa dadka niyadoodu iska wanaagsantahay. Weliba dadka faro ku tiriska ah ee weysada salaada subax ku raaxaysta ayuu ka mid ahaa. Wakhtiga subaxii inta badan waxa uu marka cibaadada Alle laga yimaado ka dhigan jiray mid uu hawlaha fiirada u baahan ku qorshaysan jiray. C/risaaq laftarkiisu wuu arkay in aanu […]
Aqoonsigu Faqriga Ma Kexeeyaa?
Tobanka dal ee ugu faqiirsan adduunka lix baa Africa ku yaal. 1. Congo 2. Mozambique 3. Uganda 6. Ethiopia 9. Tanzania Congo oo sida ay tilmaameen ah wadanka ugu faqiirsan adduunka markaad taariikhdiisa yara eegtid waad yaabaysaa. Congo waa wadamada ugu qanisan adduunka xaga macdanta. Waxase ragaadiyey dagaalo, gumeysi, adoonsi, dhac, boob weerar lagu […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka 2aad – Qaybta 15aad
Timo wax weynba kamuu soo qaadin in hablaha xanaaqa iyo diidmada C/risaaq. Isaga oo aan culays weyn isa saarin ayuu ku yidhi “is deji waa aroos meeshu markay dumar noqoto tartanku meelkasta wuu kugu qabsan karaa” Wuxuu ku war helay C/risaaq oo usii socda dhankii gabdhaha iyo wiilashu ku jaasayeen. C/risaaq inta uu dhex […]
Hogaan Mise Nidaam?
Si kasta oo hogaamiyuhu u fiican yahay hadaan fikirka lagu socdaa ama fikrada wadanka maamushaa ahayn mid sax ah jar baa laga dhacayaa. Marka fikrada ama nidaamka wadanka lagu kala socdaa yahay mid saxsan oo la hubo ayaa dhaliisha hogaanka la saaraa haday wax xumaadaan. Tusaale ahaan wadamada reer galbeedka tobankii sano ee ugu dambeeyey […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka 2aad – Qaybta 14aad
Beirut markii uu Cabdiraxmaan Case gaadhayba waxa uu isaga oon is ogayn kala jeclayna farta toos ugu fiiqay miiskii hablahu fadhiyeen. Cabdiraxmaan Case markiiba wuu gartay qofta uu saaxiibkii ku wareeriyey. Walow ay labada hablood quruxda aanay miskiin ka ahayn hadana Sagal muuqeedu wuxuu aha mid la isku raacay muran la’aan. Case: Runtaa fiican saaxiib […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka Labaad – Qaybta Saddex iyo Tobnaad
C/risaaq iyo Timo waxay fadhiisteen labadii kursi ee ka banaanaa miiska. Taas oo keentay in ay Ayaan hadalka kor u qaado markay la hadlayso Timo. Si’ay u xalisona waxay C/risaaq ka dalbatay inuu booska u bedelo oo iyadu halkiisa fadhiisato isaguna kursigeeda. C/risaaqna waxaabay u noqotay reer aan rabay roob ma igu eryay. Isagoo si […]